musha Classic FOOTBALLER Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhora Nhoroondo ine zita rekuti "Mambo". Yedu Eric Cantona Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakaitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekusimuka kwaEric Cantona. Mufananidzo Chikwereti: CNN, Instagram uye Pinterest.
Hongu, munhu wese anoziva nezve rake basa rekumutsiridza Manchester United sesimba renhabvu mu1990s. Nekudaro vashoma chete ndivo vanofunga Eric Cantona's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Eric Daniel Pierre Cantona akaberekwa pazuva re24th yaMay 1966 kuMarseille muFrance. Iye aive wechipiri pavana vatatu akazvarwa kuna amai vake, Éléonore Raurich uye kuna baba vake Albert Cantona.
Mucheche Eric Cantona naamai Éléonore Raurich. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Nyika yechiFrench yemadzinza machena neItaly, French pamwe neSpanish-Catalan midzi yakarererwa paCaillols nharaunda yeMarseille, kwaakakurira pamwe nehama dzake Jean Marie naJoel.
Kukura kwaaigara, mhuri yaCantona yaive nehurombo. Zvisineyi, aive nehuduku hunofadza hunoratidzwa neanoona bhora renhabvu yemumugwagwa uye kuonga kwakanaka kwenzvimbo dzeMedithera dzavaigara.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Pakazosvika nguva Cantona paakanga akura 15, akatanga kutamba nhabvu yakarongeka munhabvu yemuno KUC Caolaola kwaakatanga semuvhiyitsi asi munguva pfupi akafunga kuti zvimiro zvechero ipi zvinangwa zvekuponya zvibodzwa.
Eric Cantona akange aine makore 15 paakatanga kuridza Local Local SO Caillolais. Image Chikwereti: Pinterest.
Nekudaro, akadzungaira akananga kumusoro, achinakidzwa nechero chiitiko asi akamira kupfupi nechinangwa chekupikisa senge nzvimbo yepamberi. Mushure mekunge aratidzira mumitambo inopfuura ye100 yeSO Caillolais, Cantona akaisa zvikepe zvechikwata Auxerre kwaaishuvira kutendeutsa nyanzvi.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Cantona akasvika Auxerre se 16-ane makore-ese airatidzika ega ega asina mhosva. Anosimudzira nhabvu akashandisa makore maviri achishandira munzira kusvika pakati pezvaakazoita nyanzvi yekutanga panguva ye4-0 yeligi yakakunda Nancy.
Mufananidzo we Eric Cantona ari nyanzvi padivi Auxerre. Image Chikwereti: Telegraph.
Pashure pacho, basa raCantona rakaiswa mugore re1984 kuti rimugone kuita basa rekumanikidza nyika ikazobhadhariswa kuMartities. Kunyangwe zvese zvakatanga zvakanaka kuna Cantona kuMartities, "kupera zvakanaka" aive mutsara uyo wanga usati wagadzirirwa makore anotevera e7 ebasa rake.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Yakanga iri kuMartigues iyo Cantona akaita yake yekutanga inyanzvi kupusa kutaridzika kutaridzika paakarovera mumwe mukomana Bruno Martini kumeso. Mwaka wakatevera (1988) akaenda vese kungfu mukutamba Nantes mutambi, Michel Der Zakarian.
Mitezo yemendenenzi uye kumiswa kwakatangwa kudzikisira Cantona kweaakawandisa akakundikana kuburitsa mibairo inodakadza sezvo akaverengerwa mune dzimwe nyaya dzekuranga kuMarseille, Bordeaux, Montpellier neNimes kwaakazivisa kwake kwekutanga kubva pamutambo wenhabvu mu1991.
Eric Cantona akaverengerwa mumatare ekuranga kuitira iro chikamu chiri nani chebasa rake. Image Chikwereti: Pinterest.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Kuita pane zano reshamwari yake yepedyo uye fan yakakura - Michel Platini, Cantona akadzoka kunhabvu ku Sheffield Chitatu kwaaive nepfupi stint. Kubva ipapo akapedza mwedzi mishoma kuLeeds United uye akabatsira kirabhu kuhwina mukombe wePremier League.
Kubuditswa kukuru kwaCantona hakuna kuuya nguva refu yapfuura mu1993 apo akabatsira Manchester United kuhwina mukombe wake wekutanga weligi mumakore 26. Neye feat, Cantona akave mutambi wekutanga kuhwina mukombe wePremier League nezvikwata zvakasiyana mumwaka unoteedzana.
Eric Cantona akabatsira Manchester United kuhwina muPremier League zita mu1993. Image Chikwereti: Telegraph.
Kurumidza kusvika parizvino Cantona ply kutengeserana kwake muindasitiri yevaraidzo semutambi. Wekutanga kutamba gigi akauya mushure mekumiswa kwe1995 kubva munhabvu maaive achitamba mutambi wenhabvu muFrench comedy film "Le bonheur est dans le pré". Akaita mumafirimu akawanda kubvira izvozvi achinzi "Ulysses & Mona". Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Kure nekunetseka kwebasa rake rebhola, Cantona aive nemuchato-wakasununguka kuroora nemukadzi wake wekutanga Isabelle uyo akamuberekera vana vaviri, Raphael naJosephine vasati vaenda nenzira dzakasiyana mu2003.
Achienderera mberi, Cantona akasangana mutambi Rachida Brakni achibata pachigadziko firimu L'Outremangeur. Vakatanga kufambidzana kwete kwenguva refu uye ndokuenderera mberi nekuchata mu2007. Muchato wavo wakakomborerwa nemwanakomana Emir.
Eric Cantona nemukadzi wake wechipiri Rachida Brakni. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Nezve hupenyu hwemhuri yaCantona, anobva kumhuri yepasi-yemhuri yemhuri yenhengo dze3. Isu tinopa ruzivo rwechokwadi nezve nhengo dzemhuri nekukurumidza uye dzakawedzera.
Nezve baba vaEric Cantona: Albert ndibaba vaCantona. Akashanda semukoti wepfungwa panguva yehupenyu hwekare legend hupenyu uye akaenderera mberi achive amateur painter. Cantona anotenda Albert nekuvaraira kuti vagare vachiona nyika, kukoshesa runako hwayo uye kudzidza kubva munyatwa idzo dzinoitika.
Eric Cantona nababa vake Albert. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Nezve amai vaEric Cantona: Éléonore Raurich ndiye amai vaCantona. Akabatsira kurera Cantona nevanin'ina vake uye aive zvakanyanya kukurudzira kwakanaka kwazvo muhupenyu hwaCantona. Akamupa kuvimba kwaaida kuti ataure uye akamurudzira kuti aigona kuve chero chinhu chaaisarudza kuita.
Nezve hama dzaEric Cantona: Cantona achingova nevakoma vaviri, mukoma mukuru anozivikanwa saJean Marie pamwe nemunun'una mudiki anonzi Joel. Jean aimboshanda semutambi wemitambo asati apinda muzvirongwa zvemufirimu ukuwo Joel aine basa risingapfuure renhabvu asati azvivisa basa rake.
Eric Cantona vanun'una vaJean (kuruboshwe) naJoel (kurudyi). Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter.
Nezve hama dzaEric Cantona: Vanasekuru vaamai vaCantona vaive Pedro Raurich naFrancesca Farnos apo sekuru nasekuru vake baba vaJoseph Cantona naRucienne Thérèse Faglia vakateedzana. Cantona ane vanababamunini nanababamunini avo vachiri kuzozivikanwa, kunyange nababamunini vake, muzukuru wake nehama dzemukoma vake vanozivikanwa panguva yekunyora.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Kupesana nekufungidzira kwakakura, Cantona haana dambudziko remafungiro asi hunhu uhwo vazhinji vasingakwanise kubata. Wake munhu anoratidza hunhu hweGemini zodiac zviratidzo sekukurumidza-huro uye kunzwa.
Zvikawanda saka ane moyo mune tune, anofungidzira uye akazaruka kuratidza zvinhu nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kutamba bhora bhora, kuita, kunyora uye kupedza nguva nemhuri uye neshamwari.
Eric Cantona anofarira kutamba bhora bhora. Image Chikwereti: Pinterest.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Iwe unoziva here kuti Catona ine mutengo unofungidzirwa unodarika emamiriyoni emadhora 25 panguva yekunyora? Mutambi wenhabvu cum mutambi akaisa nheyo dzeupfumi hwake semutambi asati abatanidzwa zvizere muvaraidzo.
Eric Cantona ndemumwe wevashoma venhabvu ngano vakaita kuti ive huru mushure mekutora basa. Image Chikwereti: ratidza.
Asset iyo inopupurira yeiyo legend hupfumi hwakakura uye inopa inkling kune yake mari yekushandisa inosanganisira yake $ 2m imba yepamusoro mune Fontenay-sous-Bois mudunhu reParis. Kunyangwe zvisiri zvakanyanya kuzivikanwa nezvekuunganidzwa kwemotokari dzeCantona, zvinofungidzirwa kuti ane penchant yemakiriketi akatasva anoburitsa maitiro ake echimiro.
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kuvonga nekuverenga kusvika panguva ino. Pano, tinokupa iwe unoshoma-kuzivikanwa chokwadi chausina kumboziva nezve Eric Cantona.
Chitendero: Cantona achiri kutaura pachena nezvechinamato chake. Naiyewo anozivikanwa kuti haatendi kuti kuna Mwari. Nekudaro, anonamata kune humwe hunhu hwakanaka sekusimudzira, kushambadzira uye kudzorera.
Kusvuta uye kunwa: Anopihwa kuputa fodya uye kure-skrini pamwe nekunwa zvine mutsindo. Zvidzidzo zvakapfuura zvemapatani ake ekuputa zvinoratidza kuti anonamira kuputa fodya seanopesana ne cannabis uye zvimwe zvinokuvaraidza zvekuputa.
Eric Cantona anorova uye anonwa zvine mutsindo. Chifananidzo Chemifananidzo: Spool uye Pinterest.
Tattoos: Iyo ngano ndeye yezvirimwa zvekare chevatambi venhabvu vasina ma tatto panguva yekunyora. Kana izvo zvipingaidzo zvinomufadza iye kuwana muviri wehupi sezvo iye kare akapfuura mukurumbira wake.
Zvinoreva Zita: Unoziva here kuti zita rekuti Eric rinoreva kuti “Mumwe” kana “Mutongi” ukuwo “Cantona” izita rekuFrance rinoreva kuti “Thanks”. Uyezve, akatumidzwa zita rekuti "Mambo" nekuda kwebhola rake kuEngland.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Eric Cantona Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Fred Hurukuro Yechidiki Plus Untold Biography Facts